ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ - China Products Factory & Suppliers
3D ကွေးထားသော Welded Mesh Fence Panel Triangle Welded Fe ...
ဆွဲကြိုးလင့်ကွက်ကွင်းဆက် link စိန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း ...
welded ဝါယာကြိုးကွက်သွပ်ရည်စိမ် welded ဝါယာကြိုးကွက် panel ကို w ...
hexagonal netting ကြက်ဝါယာကြိုးသုံးခြံကွန်ချာ
သွပ်ရည်စိမ်ဝါယာကြိုး PVC coated သံဆူးကြိုးနှစ်ထပ် ...
welded wire mesh galvanized welded wire mesh panel panel welded mesh panel ကွန်ကရစ်ကွန်ချာ
Welded wire mesh သည်အရည်အသွေးမြင့်သံဝါယာကြိုးများကိုအလိုအလျောက်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ခေတ်မီဂဟေဆော်နည်းစနစ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ လမ်းဆုံတိုင်းတွင်တစ် ဦး ချင်းဂဟေဆော်သည်။ ၎င်းကိုစက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်၊ ကြက်အိမ်များ၊ ကြက်ခြင်းတောင်းများ၊ ပြေးလမ်းကာရံခြင်း၊ အ ၀ တ်ထုတ်စက်၊ အသီးခြောက်မျက်နှာပြင်၊ ခြံစည်းရိုး ...
Welded mesh panel Black/Galvanized Welded Wire Mesh Panel Welded Panel သံမဏိ Welded Mesh Panel ကွန်ကရစ်ကွန်ကရစ်ကွန်ကရစ်ကွန်ကရစ်အားဖြည့်ကွက်အားဖြည့်ကွန်ကရစ်သံမဏိကွက်
Welded wire mesh panel (ကွန်ကရစ်ကွန်ကရစ်) ကိုအရည်အသွေးမြင့်သံဝါယာကြိုးများနှင့်သံမဏိဝါယာကြိုးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအလိုအလျောက်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ခေတ်မီဂဟေဆော်သည့်နည်းလမ်းတို့ဖြင့်အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်တပ်ဆင်ထားသည်၊ လမ်းဆုံတိုင်းတွင်တစ် ဦး ချင်းဂဟေဆော်သည်။ အကာအကွယ်၊ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ လက်ရွယ်များ၊ မျက်နှာကျက်ကြွေပြားများ၊ ဗိသုကာနှင့် partiton စနစ်များ
ဆဋ္ဌဂံဝါယာကြိုးကွက်ကိုကြက်ဝါ၊ ကြက်ခြံစည်းရိုး၊ ဆဋ္ဌဂံဝါယာကြိုးကွက်နှင့် hex ဝါယာကြိုးကွက်များဟုလည်းလူသိများသည်။အဲဒါကို သံဝါယာကြိုး၊ ကာဗွန်နိမ့်သံမဏိဝါယာကြိုး (သို့) သံမဏိသံမဏိဝါယာကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ သွပ်ရည်စိမ်ထားသောပုံစံနှစ်မျိုးရှိသည်။ လျှပ်စစ်သွပ်ရည်စိမ် (အအေးသွပ်ရည်စိမ်) နှင့်ပူသောနှစ်ထားသောသွပ်ရည်စိမ် ပေါ့ပါးသောသွပ်ရည်စိမ်ဝါယာကြိုး mesh ကိုကြက်ဝါ၊ ယုန်စည်းရိုး၊ rockfall netting နှင့် stucco mesh၊ heavyweight ဝါယာကြိုး mesh ကို gabion ခြင်းတောင်းသို့မဟုတ် gabion အတွက်သုံးသည်။သတျတောမရ။ သွပ်ရည်စိမ်ထားသောကြက်သားဝါယာကြိုး၏စွမ်းဆောင်ရည်ဦး တည်ချက် ချေး၊ သံချေးတက်ခြင်းနှင့်ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့ကြောင့်၎င်းသည်ဖောက်သည်များအကြားရေပန်းစားသည်။
ကွင်းဆက် link ကွက်ကွင်းဆက် link စိန်ခြံစည်းရိုးကာရံထားသောဘောလုံးကွင်းခြံစည်းရိုးဘောလုံးကွင်းခြံစည်းရိုး
Chain link ခြံစည်းရိုးကိုလည်းစိန်အဖွင့်နှင့်စိန်ဝါယာကြိုးကွက်ဟုအမည်ပေးထားသည်။ ၎င်းကိုသံကြိုးဖြင့်ယက်လုပ်ခြင်းကိုအမျိုးမျိုးသောသတ္တုဝါယာကြိုးများဖြင့်ပြုလုပ်သည်ဝါယာကြိုး စက် ကျွန်ုပ်တို့၏ကွင်းဆက် linkကွက် ပစ္စည်းများကို stainless steel, galvanized နှင့် PVC coated wire တို့ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကိုများသောအားဖြင့်ဥယျာဉ်များ၊ အားကစားခြံများ၊ စက်မှုဇုန်များ၊ အိမ်များ၊ လမ်းများနှင့်ပွဲလမ်းသဘင်များတွင်သုံးသည်။
သွပ်ရည်စိမ်ချဲ့ထားသောသတ္တုကွက်၊ သွပ်ရည်စိမ်ထားသောဝါယာကြိုးကွက်၊ အလူမီနီယံချဲ့ထားသော Diamond ပြားချပ်ချပ်စာရွက်
crimped ဝါယာကြိုးကွက်များတူးဖော်ခြင်း crimped mesh Mine sieving mesh Vibrating mesh Wire hooked Screen မင်ယက်မျက်နှာပြင် mesh
Crimped mesh ကိုကာဗွန်သံမဏိနှင့်သံမဏိပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် S.S304, S.S316, S.S316L, S.S904L စသည်တို့ကဲ့သို့သင်၏ရွေးချယ်မှုအတွက်သံမဏိသံထည်ပစ္စည်းများစွာရှိသည်။ ဟိ pအစွန်းများသည်အလွန်ချပ်ချပ်၊ ချော်သောဝါယာကြိုး၊ ကျိုးနေသောဝါယာကြိုးမရှိ.
3D Curved Welded Mesh Fence Panel Triangle Welded Fence 3D curved Garden Fence bening ခြံစည်းရိုး panel ကို welded wire mesh ခြံစည်းရိုး panel
တြိဂံ Welded ခြံစည်းရိုးကိုဝါယာကြိုးဆွဲခြင်း၊ ဝါယာကြိုးဂဟေဆော်ခြင်း၊ panel ကွေးခြင်း၊ panel galvanizing နှင့် panel PVC coating တို့ပြုလုပ်ပြီးနောက်ပျော့ပျောင်းသောသံမဏိဝါယာကြိုးများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ သံချေးဆန့်ကျင်မှုကောင်းသည်။ 3D ကွေးဥယျာဉ်ခြံစည်းရိုးကိုလည်း bening ခြံစည်းရိုး panel, welded ဝါယာကြိုး mesh ခြံစည်းရိုး panel, etc
Alkali ခံနိုင်ရည်ရှိသောအင်္ဂတေ Fiberglassglass Mesh အဆောက်အ ဦး အားကောင်း Fiberglass Net ပိုက် Fiberglass Mesh Fiberglass plastering mesh alkali resistant fiberglass mesh mesh
Fiberglass Mesh သည်အဓိကအားဖြင့် Alkali ခံနိုင်ရည်ရှိသော Fiberglass ဖျင်ကို၎င်းအား C or E Glass Fiber Yarn (အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများသည် Asilicate၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှု) အထူးယက်လုပ်နည်းတစ်ခုမှတဆင့်၎င်းကို Antalkali ဖြင့်ဖုံးအုပ်ပေးပြီးအပူအပူချိန်ဖြင့်ကုသသည်။ အပြီးသတ်။ ၎င်းသည်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အလှဆင်ရာတွင်စံပြအင်ဂျင်နီယာပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
သံမဏိဝါယာကြိုးကွက် stainless steel mesh mesh ယက်အမျိုးအစား
1.Stainless steel mesh material: AISI302, 304,304L, 316,316L, 430,309,310S
2. ကြိုးအချင်း: 0.015-5.00 မီလီမီတာ
3. ရက်လုပ်သောအမျိုးအစားများ: Plain Weave, Twill Weave, Dutch Weave, Reverse Dutch Weave Type ။
သွပ်ရည်စိမ်အင်းဆက်မျက်နှာပြင်ကို galvanized window screen ဟုလည်းခေါ်သည်သွပ်ရည်စိမ်သံပြတင်းပေါက်မျက်နှာပြင်၊ သွပ်ရည်စိမ်ခြင်ထောင်မရ။ ၎င်းသည်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်စျေးအသက်သာဆုံးအင်းဆက်မျက်နှာပြင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သွပ်ရည်စိမ်ပိုးကောင်မျက်နှာပြင်၏ပစ္စည်း ကွက် ရိုးရိုးယက်လုပ်ထားသောကာဗွန်သံမဏိသည်၎င်းသည်သွပ်ရည်စိမ်နိုင်သည် အဖြူသို့မဟုတ်အပြာရောင် ယက်မလုပ်ခင်သို့မဟုတ်ယက်ပြီးနောက်
သံမဏိလုံခြုံရေးမျက်နှာပြင်အပြင်၊ ၁၁ ကွက်ရှိသောသွပ်ရည်စိမ်သံမဏိလုံခြုံရေးဖန်သားပြင်မှပူပူနွေးနွေးဆန့်ထားသောသံမဏိဝါယာကြိုးနှင့်အနက်ရောင်ပါဝါအုပ်ထားသောပြတင်းပေါက်များသည်ပြတင်းပေါက်များနှင့်တံခါးများအတွက်နောက်ထပ်ခိုင်ခံ့သောတာရှည်ခံလုံခြုံရေးမျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအယက်သွပ်ရည်စိမ်ကွက်သည်သြစတြေးလျစျေးကွက်တွင်လူကြိုက်များသည်။ သံမဏိကွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသွပ်ရည်စိမ်သံမဏိကွက်သည်စီးပွားရေးနှင့်အဆင့်မြင့်ခွန်အားပိုများသည်။
အလူမီနီယံပြတင်းပေါက်မျက်နှာပြင်ကို“ အလူမီနီယမ်မျက်နှာပြင်”၊ “ အလူမီနီယမ်ပိုးမျက်နှာပြင်ပြတင်းပေါက်”၊ ” epoxy coated အလူမီနီယံကွက်” ဟုအမည်ပေးထားသောအလူမီနီယမ်မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းဝါယာကြိုးများဖြင့်ရက်လုပ်ထားသည်။ အလူမီနီယမ်ခြင်မျက်နှာပြင်ကိုအနက်ရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ ငွေမီးခိုးရောင်၊ အဝါရောင်၊ အပြာရောင်စသည့်အရောင်အမျိုးမျိုးတွင် epoxy coating ဖြင့်သုတ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကို“ epoxy coating aluminium screen” ဟုလည်းခေါ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလူမီနီယံအလွိုင်းမျက်နှာပြင်ကွက်သည် GB/T 10125 ချေးစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ဆားဖြန်းစမ်းသပ်ခြင်းကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်စိုစွတ်သောနေရာသို့မဟုတ်အခြားကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေတွင်သုံးရန်လုံလောက်သော corrosion ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
Stainless steel window screen ကို stainless steel insect screen, security window screen ဟုလည်းခေါ်သည်။ ၎င်းကိုတာရှည်ခံမှုနှင့်ကြာရှည်ခံနိုင်သောစွမ်းဆောင်ရည်တို့ဖြင့်အရည်အသွေးမြင့် Stainless Steel ဝါယာကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သံမဏိဝါယာကြိုးကွက်များသည်သံချေး၊ သံ၊ အပူ၊ အယ်ကာလီတို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့်၎င်းကိုပြတင်းပေါက်များ၊ တံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များမျက်နှာပြင်များတွင်သုံးနိုင်သည်။